လက်ကား Latex 11 PCS လက်ကားအရောင်းဆိုင် ...
Burs ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ...
ဒီဇိုင်းသစ် PVC ကြိုးထ ...
Custom logo ဖယ်ရှားနိုင်သော Rectangular and Round Yoga Bolster Buckwheat Kapok Rectangle အကြီးစားယောဂခေါင်းအုံး Bolster
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Yoga bolster / yoga bolster ခေါင်းအုံး
ဘဲဥပုံအရွယ်အစား - ၇၀ * ၃၀ * ၁၇ စင်တီမီတာ
yoga ကျားကန်: 70 * 23cm
ကြံ့ခိုင်ရေးကိုယ်အလေးချိန်မြှုပ်မြှုပ်အကာအကွယ်ထုံးစံ Barbell ကီထိုင်ခုံပခုံး Pad ပန်းရောင်
လေးလံသောအလေးမများကိုသယ်ဆောင်စဉ်နာကျင်မှု၊ အကြိတ်များနှင့်ဒဏ်ရာအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်သင်၏ Barbells တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Squat Pads များကိုလျှော်ပါ။ ခရီးဆောင်ဒီဇိုင်းနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ၎င်းသည်လေးလံအရှိန်မြင့်သောထိုင်ခုံများပြုလုပ်ရန်အတွက်အဆင်ပြေစေမည့်ကြိုးများကိုပြုလုပ်သည်။
မူလစာမျက်နှာကြံ့ခိုင်ရေးပြိုင်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးတီးဝိုင်းနိုင်လွန်စုစုပေါင်းခုခံစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကြိုးအားကစား trx လေ့ကျင့်ခန်း
ကြိုး 1.pull (Adjust နိုင်)
Hook မှလက်ကိုင်သို့ 5.net အိတ်
အရှည် Adjust: 130cm-180cm
အပြင်ဘက်စခန်းရှိစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်အိပ်စက်နိုင်သောအိတ် ၈၀၀ ဂရမ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Walking Sleep Bag ကိုဖြည့်ပါ
* Customizable ထုတ်ကုန်ပုံနှိပ်သတင်းအချက်အလက်။
အပြင်ဘက်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ရေးအားကစားအားကစားရုံခရီးသွားခြင်း Tote Duffel အိတ်များနှင့်ဖိနပ်အိတ်များ
R အရွယ်အစား - ၅၆″ x ၂၈.၈″ x ၂၈″ အရွယ်အစား - ၅၆ R အကျယ်အ ၀ န်းအားကစားခန်းမအိတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအားကစားရုံအိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလေးချိန် ၁.၀ ကီလိုဂရမ်၊ ထုံးစံသယ်ဆောင်ရန်အတွက်လက်ကိုင်နှစ်ခုနှင့်ချိန်ညှိ။ ဖြုတ်နိုင်သောပခုံးကြိုးနှင့်အတူပါရှိသည်။
Battle Rope Poly Dacron လေ့ကျင့်ခန်းမလုံမခြောင်းကြိုးကြိုးအားကစားရုံကြွက်သားကိုက်ခြင်းကိုယ်ခန္ဓာခွန်အားလေ့ကျင့်ရေးအားကစားကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း
တိုက်ခိုက်ခြင်းကြိုးလေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အားကစား၊ စစ်တပ်၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်ကြည့်လို။ နေလိုလျှင်ရနိုင်သည်ဖြစ်စေမည်သူမဆိုများစွာအကျိုးပြုလိမ့်မည်။ Battling Ropes System နှင့်မှတ်မိရမည့်အဓိကအချက်မှာသင်သည်စွမ်းအင်ပိုမိုထုတ်ပေးရုံသာမကကြာရှည်စွာစွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သင်၏ဘ ၀ ၏ကဏ္ aspects အားလုံးတွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာခြင်း
လေ့ကျင့်ခန်းကြံ့ခိုင်ရေးကြံ့ခိုင်ရေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် 2021 Hot Sale D-ring ချိန်ညှိနိုင်သောခြေကျင်းလက်ပတ်နာရီ
Padded Neoprene ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်နိုင်လွန်ကြိုးများ၊ အရှည် ၁၀″ နှင့်အကျယ် ၄″ ခြေကျင်းဖုတ်ကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ချိန်ညှိချိတ်နှင့်ကွင်းဆက် Velcro ပိတ်သိမ်း
နှစ်ချက် d-ring ပူးတွဲချိတ်များ Chrome ချထားတဲ့
NQ အားကစားရေစိုခံ Eva Gym ရေမြှုပ် Eco ဖော်ရွေမြင့်သော Density Premium Cork ယောဂပိတ်ပင်တားဆီးမှု
ယောဂကျင့် ၀ တ်ပြုမှုကို ECO နှင့်အဆင်ပြေသောပစ္စည်းများဖြင့်သိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီးတင်းကြပ်သောထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကသင့်အားယောဂထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်။
အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဆန့်ကျင်သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအတွက် PVC မှတ်ဥာဏ်အမြှုပ်များ၊
3/4 maximum အမြင့်ဆုံးသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုရရှိစေရန်အထူ၊ မည်သည့်အရာမလိုဘဲသန့်ရှင်းလွယ်ကူစေရန်၊
ရေမှော်မှော်ဥယျာဉ်မှူးရေမှုန်ရေမွှားဥယျာဉ်ဥယျာဉ်ကားရေပိုက်ပိုက် ၂၅-၂၀၀FT ရေလောင်းသည်
အရွယ်အစား: 25 Feet, 50Feet, 75Fetet, 100Feet, 125Feet, 150Fetet, 175Fetet, 200 Feet
အရောင်: အပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊
ထုပ်ပိုး: OPP Bag / PCs
စက်ရုံပြင်ပအရောင်များဖြစ်သော Soft High Elastic Tube Silicone Latex Tubing
ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ရေး: 100% သဘာဝကစေးရော်ဘာ
အတွင်းပိုင်း dia : 2mm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
အပြင် Dia:3~ 20mm
အသုံးပြုမှု : ဥယျာဉ်ရေပိုက်၊ ရေပိုက်၊ ရေပိုက်
ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်း : နှစ်သို့မဟုတ် extruded
အရည်အသွေးမြင့်အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်းရော်ဘာလေ့ကျင့်ခန်း Stretch Elastic Pull Up Floss Assist Bands
1. တီးဝိုင်းသည် elasticity၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်တောက်ပသောအရောင်များဖြင့် 100% latex ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ခြစ်ရာများမရှိဘဲချောမွေ့သော၊ ပူဖောင်းမရှိ၊ အရောင်တူညီခြင်း၊ အိုမင်းခြင်းကိုခံခြင်း၊